Itekhnoloji: Ukujolisa ngokuLula, Ayisiyiyo Solution | Martech Zone
I-teknoloji: Ukujoliswa ngokuLula, akusoloko isisombululo
NgoLwesithathu, Meyi 5, 2010 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 UHarry Howe
Imeko yanamhlanje yeshishini inzima kwaye ayixoleli. Kwaye iya isanda ngakumbi. Ubuncinci isiqingatha seenkampani zemibono eziphakanyisiweyo kwincwadi yeklasi kaJim Collins Yakhelwe ukuGcina baye batyibilika ekusebenzeni nakwidumo kwiminyaka elishumi ukusukela oko yapapashwa okokuqala.
Enye yezinto ezinegalelo endizibonileyo kukuba zimbalwa iingxaki ezinzima esijamelana nazo namhlanje zinobukhulu obunye - into ebonakala ngathi yingxaki yetekhnoloji kunqabile ukuba ibe lula. Ingxaki yakho inokuzibonakalisa kwifayile ye- iteknoloji arene, kodwa amaxesha amaninzi ndifumanisa ukuba kukho abantu kwaye inkqubo izinto kwingxaki.
Njengokuba ukusebenzisa kwethu itekhnoloji kukhule, kuye kwadibana neenkqubo zeshishini ezixhasayo. Kwangokunjalo, ukuntsokotha kweshishini kuye kwaqhuba iinkqubo ezintsonkothileyo ezinokuxhaswa kuphela yitekhnoloji ephucukileyo kunye nabantu abaqeqeshwe kakuhle.
Iinkokeli azizalwanga zenziwe. Kwaye zenziwe njengayo nayiphi na into, ngokusebenza nzima. Kwaye lelo lixabiso ekuya kufuneka sihlawule ukufeza loo njongo, okanye nayiphi na injongo. - UVince Lombardi
Isifundo kuko konke oku kukuba itekhnoloji iyodwa ayiyombumbulu yesilivere yengxaki nganye ojamelene nayo neshishini lakho. Inika isisombululo esilingayo kuba ungayithenga okanye uyithengise ngaphandle. Ngokwahlukileyo, ukulungisa imiba yabantu kunye neenkqubo zeshishini kufuna umsebenzi onzima.
tags: QinisekisaUkulandelwa kwedathaUkuQinisekiswa kweDathaIikholejiukuthengisa umcimbiIAdresi entshangokungacacangauluhlu lwezempiloIincwadi zentengisoUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiUphando lwezoPhandoyentsimbi
UHarry Howe uyabuthanda ubunkokheli kunye nokuxhasa uluntu lwethu loosomashishini. Njengomongameli we Ubunkokeli beHowe, ubonelela ngenkxaso yokubonisana nesandla kubanini bamashishini abathe baba ngamaxhoba empumelelo yabo, besebenza kunye nabo ekuphuhliseni iinkqubo zeshishini, ukuxhasa itekhnoloji, kunye nabantu abaza kugcina ishishini labo ixesha elide.
I-Facebook Njengeqhosha kunye nokudityaniswa kweWordPress
Kukho ubuChwepheshe apha eSilicon Prairie